‘लकडाउन’ को अर्थ के हो ? र यसको नेपाली अनुवाद पढनुहोस « Online Tv Nepal
‘लकडाउन’ को अर्थ के हो ? र यसको नेपाली अनुवाद पढनुहोस
Published : 25 March, 2020 9:50 am
अङ्ग्रेजी भाषाको शब्द ‘लकडाउन’ अहिले विश्वव्यापी चर्चा र प्रचलनमा छ । यति मात्र होइन, यो शब्द अहिले व्यवहारिक रुपमै अभ्यासमा पनि छ । उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलको नेतृत्वमा रहेको कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण नियन्त्रण र रोकथामसम्बन्धी उच्च स्तरीय समन्वय समितिको सोमबार बसेको बैठकले देशलाई चैत १८ गतेसम्म ‘लकडाउन’ गर्ने निर्णय गरेको छ । फ्रान्सबाट फर्किएकी एक युवतीमा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण पुष्टि भएपछि सरकारले देशै ‘लकडाउन’ गर्ने घोषणा गरेको हो ।
चीनको हुवेई प्रान्तको वुहानमा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणले महामारीको रुप लिएपछि त्यहाँ ‘लकडाउन’ गरिएको थियो । कोरोना भाइरसको कारण भएको त्यो पहिलो ‘लकडाउन’ थियो जुन दुई हप्ताको लागि घोषणा गरिएको थियो । तर त्यो ‘लकडाउन’ एक महिनासम्म लम्बिएको थियो । भारतमा कोरोना भाइरसबाट सङ्क्रमित हुने र ज्यान जानेको संख्या बढ्न थालेपछि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले गएको आइतबार भारतभरि ‘जनता कफ्र्यु’ लगाउनुभएको थियो भने सङ्क्रमण भेटिएका २२ वटा राज्यका ७५ जिल्लामा ‘लकडाउन’ घोषणा गरिएको छ ।
त्यस्तो अवस्थामा अनावश्यक रुपमा कसैलाई घरबाट बाहिर निस्किने अनुमति हुँदैन । नागरिकलाई औषधि र खाद्यान्न आपूर्तिका लागि मात्रै घरबाट बाहिर जान दिइन्छ । महामारी कोरोना भाइरसलाई रोक्ने सन्दर्भमा ‘लकडाउन’ भनेको आमनागरिक आफ्नो घरमै बस्नु हो । यो एक किसिमको सार्वजनिक विदाको अवस्था हो । ‘लकडाउन’ सम्बन्धित सरकार, सार्वजनिक निकाय वा प्रशासनले घोषणा गर्ने गर्दछ ।
‘लकडाउन’लाई नेपालीमा के भन्ने वा यसको नेपाली अनुवाद के हुन्छ भन्ने विषयमा सोधखोज जारी छ । अहिलेसम्म यसको कुनै अनुवाद सर्वस्वीकार भएको छैन । तर यस सम्बन्धमा धेरैले आआफ्ना धारणा राख्ने गरेका छन् ।कसैले ‘लकडाउन’को नेपाली अनुवाद ठप्प भनेका छन् भने कसैले यसलाई बन्दको रुपमा अथ्र्याएका छन् । यसको सबभन्दा राम्रो नेपाली अनुवाद तालाबन्दी हो भन्नेहरु पनि छन् । ‘लकडाउन’को नेपाली अनुवाद जे भए पनि यो दुई प्रकारको हुन्छ – स्वेच्छिक ‘लकडाउन’ र बाध्यकारी ‘लकडाउन’ ।